Nhazi ọkwa Saudi Style! Ndị ọkachamara 1000+ ga -aga n'ihu na usoro ọhụrụ maka njem nlegharị anya ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Nhazi ọkwa Saudi Style! Ndị ọkachamara 1000+ ga -aga n'ihu na usoro ọhụrụ maka njem nlegharị anya ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Itinye ego na mmadụ, ime ihe na nsonaazụ bụ isi ihe minista njem nlegharị anya Saudi Arabia setịpụrụ maka ụwa. Saudi Arabia kpọrọ 1000+ nke ndị isi njem nlegharị anya na-enwu enwu na nke na-abịanụ na KAICC dị na Riyadh, Ọktọba 26-28.
Ọdịnihu nke itinye ego dị na Riyadh yana ụlọ ọrụ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
26-28 Ọktọba, 2021 bụ emume ncheta afọ ise nke akpọrọ "itinye ego na mmadụ" na ebe a bụ Hotel Ritz-Carlton na Eze Abdulaziz International Conference Cente (KAICC) na Riyadh na Saudi Arabia
Ministri njem nlegharị anya nke Saudi Arabia kpọrọ ndị ndu njem nlegharị anya 1000+, gụnyere ndị minista na -ahụ maka njem si n'akụkụ ụwa niile, ka ha tọọ ntọala maka mgbake njem, itinye ego na ime ihe.
Saudi Arabia na-apụ apụ, na dịka egosiri ya ọtụtụ oge n'oge ọgba aghara COVID-19, Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Alaeze HE Ahmed Al-Khateeb ugbu a gbakwunyere njem nlegharị anya na mkparịta ụka ahụ. Ọ kpọrọ ndị isi njem nlegharị anya 1000+ site na ọha na nkeonwe na mmemme FII na -abịa na Riyadh.
Site n'ụkpụrụ niile, FII tụgharịrị na mkparịta ụka "itinye ego na mmadụ" ka ọ bụrụ onye na-eme mgbanwe maka njem na mgbake njem ụwa.
Na Mee 26, 2021, otu onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Saudi kwuru echiche ya na njem nlegharị anya ụwa, mgbe ọ na -akwado nzukọ mgbake njem site n'aka World Tourism Organisation (UNWTO).
Ọnwa isii ka e mesịrị, ọ pụtara Zurab Pololikashvili, onye odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO hụrụ FII na Riyad dị ka asọmpi wee kpọọ maka UNWTO World Tourism Congress na Barcelona na-emegide ozugbo na ụbọchị FII setịpụrụ na Riyadh.
ThEji otu ụzọ ahụ mee ihe mgbe UNWTO haziri nzukọ isi n'otu oge WTTC nwere ọgbakọ zuru ụwa ọnụ ya na Mee na Cancun, Mexico.
UNWTO na -akpa agwa dị ka nwata
eTurboNews jụrụ n'April ma emere nke a ka ọgbakọ WTTC daa? UNWTO na -eme atụmatụ ịsọ mpi na atụmatụ Saudi Arabia? Nkwupụta dị ala ga-asị: UNWTO na-akpa agwa dị ka nwata.
Onye nnọchi anya UNWTO na onye ozi nke akpọrọ na Barcelona agwalarị eTurboNews ọ ga -aga Saudi Arabia.
Kedu ihe bụ atụmatụ itinye ego n'ọdịnihu (FII)?
Atụmatụ itinye ego nke ọdịnihu (FII) bụ ikpo okwu mba ụwa maka arụmụka ọkachamara na-eduzi n'etiti ndị isi ụwa, ndị na-etinye ego na ndị na-emepụta ihe nwere ike ịkpụzi ọdịnihu nke itinye ego zuru ụwa ọnụ. Ihe a na -elekwasị anya bụ itinye ego n'ọrụ iji mee ka ohere ito eto pụta, mee ka ihe ọhụrụ na teknụzụ na -akpaghasị anya, na dozie nsogbu ụwa niile.
Ụlọ ọrụ FII lekwasịrị anya n'akụkụ ise:
Site na iduzi mbọ na akụrụngwa na mpaghara ndị a, FII kwenyere na ha nwere ike mepụta mmetụta dị mma na mmadụ.
Chee echiche, gbanwee, mee ihe
Ewubere ụlọ ọrụ FII na ogidi atọ - Chee echiche, XCHANGE, ACT - site na nke anyị na -achụso ebumnuche anyị site na ntọala ESG siri ike. Ogidi echiche na -enye ike na -enwu enwu nke ụwa ịchọpụta ụzọ kacha mma maka ọdịnihu dị mma.
Ogidi XCHANGE na -emepụta nyiwe ebe ndị ọkachamara, ndị na -emepụta ihe ọhụrụ, ndị isi, na ndị na -etinye ego na -ezukọta ịkekọrịta ihe ọmụma na imekọ ihe ọnụ maka mgbanwe. N'ikpeazụ, ogidi ACT na-achọ ma tinye ego na teknụzụ ọhụrụ na-ekwe nkwa ngwọta ụwa n'ezie.
Ihe ọzọ dị iche na FII Institute bụ nkwụsi ike na ụkpụrụ ESG dị ka ụzọ maka nkwado ụwa na ọdịnihu dị mma. Anyị na -achọ ịbawanye mmata banyere ma melite mmejuputa ụkpụrụ ESG ma kwe nkwa ijikwa ọrụ anyị nke gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọrụ nchịkwa iji rube isi n'ụkpụrụ ndị ahụ.
Isi ihe dị iche na ụlọ ọrụ FII na atụmatụ ndị ọzọ yiri ya na -arụ ọrụ. FII na-agbali mbọ nyocha na-akarịghị nke ukwuu site na ime ihe site na itinye ego na ihe ga-eme n'ọdịnihu.
A maara FII ka ọ na -akpọ oku n'uwa ụwa niile ka ha mee ihe, na -ekepụta ikpo okwu ebe a na -ewepụta echiche, ma na -echekwa itinye ego iji mee ka ọ bụrụ eziokwu.
Na nchịkọta, ebumnuche nke ụlọ ọrụ FII bụ ịhazi ma mee ka echiche dị iche iche wee dozie nsogbu ụwa kacha dị ngwa site na teknụzụ dị elu na -adigide.
Ihe omume Investment in Humanity na -abịanụ na -enwekarị nnọkọ njem nlegharị anya abụọ edepụtara:
Akwụkwọ ozi site n'ọdịniihu, itinye ego na njem nlegharị anya.
Njem azụmahịa na oge ntụrụndụ maka ụwa na -adigide.
Na mgbakwunye na ịgbakwunye ndị isi njem nlegharị anya 1000+ na mkparịta ụka FII, ụlọ ọrụ njem nwere netwọkụ na ohere ime ụlọ maka ndị isi ịbịakọta ọnụ dịka enweghị ihe omume ọ bụla kemgbe ọrịa ọjọọ malitere.
Kọmitii Nhazi maka FII:
Gọvanọ PIF, onye isi oche Saudi Aramco Saudi Arabia
Onye nnọchi anya KSA na USA Saudi Arabia
Ọ bụ Senator Matteo Renzi
Onye omebe iwu Italiantali maka Florence na onye bụbu Prime Minista Italy
Onye guzobere & Onye isi njikwa EMAAR Njirimara United Arab Emirates
Dọkịta Peter H. Diamandis
Onye guzobere X-Prize Foundation & Mahadum Singularity USA
Prọfesọ Tony Chan
Onye isi oche nke Mahadum Sayensị na Teknụzụ nke King Abdullah (KAUST)
Prọfesọ ọgwụ kemịkalụ, Mahadum California (UCSD) Saudi Arabia